कोरोनाले हरेक काम गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई क्षति पुर्‍याएको छ । अझ विशेष मारमा भने चलचित्र क्षेत्र पर्ने गरेको छ ।
कोरोनाका कारण धेरै चलचित्रको रिलिज मिति सारिएको छ । आउने चलचित्रको छायाँकन पनि रोकिएको छ ।
यसैबीच सलमान खानको चलचित्र ‘टाइगर ३’ र शाहरुख खानको ‘पठान’को छायाँकन फेरि एकपटक स्थगित भएको छ ।
बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण यशराज फिल्म्सले आफ्ना तीन प्रमुख फिल्म पठान, टाइगर ३ र इरफान खानका छोरा बाबिलको वेब सिरिजको निर्माण स्थगित गरेको छ ।
टाइगर ३ र पठानका चालक दलका सदस्यहरू निकै उच्च रहेको र यस्तो अवस्थामा ठूलो संख्यामा मानिसहरूको जमघट जोखिमबाट मुक्त नहुने दाबी गरिएको छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर फिल्म निर्माता आदित्य चोपडा र निर्देशकले सुटिङ रोक्ने निर्णय गरेका हुन् । साथै, कोरोना संक्रमित घटेपछि छायाँकन सुचारु गरिने छ ।
रुघाले सतायो ? लिनुस् स्टीम !
‘लक्का जवान’ एउटा ‘अर्ग्यानिक’ नेपाली चलचित्र हो- शिवहरि पौड्याल (अन्तर्वार्ता)
शिवहरि पौड्याल नेपाली दर्शकमाझ लोकप्रिय कलाकार हुन् । विशेषगरी हास्य कलाकारका रुपमा परिचित उनले थुप्रै टेलिसिरियल तथा चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन् । हास्य टेलिसिरियल ‘जिरे खुर्सानी’मा लामो समय नि...
स्वप्न सुमन र ज्योत्सनाले कसे लगनगाँठो
युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय गायक स्वप्न सुमन र अभिनेत्री ज्योत्सना योगीले लगनगाँठो कसेका छन् । बिहीवार उनीहरूले सीमित साथी र परिवारका बीचमा विवाह गरेका हुन् । शुक्रवार उनीहरूले ‘वाचा भयो&...
‘लौरो’ लिएर ‘हामी अटेरी’ गीत सार्वजनिक
‘हामी अटेरी’ भन्ने गीत सोमवार सार्वजनिक भएको छ । अटेरी अभियानको चुनावी अभियानलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सो गीत सार्वजनिक गरिएको हो । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका अटेरी अभिया...
राजेशलाई प्रस्तुत गर्दै ‘सत्यम’को शीर्ष गीत सार्वजनिक, केही ‘डाइलग’ पनि समावेश [भिडियो]
निर्माण घोषणा भएको लामो समयसम्म छायाङ्कनमा जान नसकेको चलचित्र ‘सत्यम’को शीर्ष गीतको लिरिकल भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । चलचित्र निर्माण हुने निश्चित भएको जानकारी दिलाउन र चलचित्रको माहोल तयार पा...